Ihe ndi na-akpali agụụ mmekọahụ na mmekorita nwoke na nwanyi Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home gbasara Anyị Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Mmekọahụ Mmekọahụ
TRF na-enye RCGP Accredited Workshops
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị na mmekorita nwoke na nwanyị, bịakwute ụlọ ọrụ anyị nke otu aha. Collegelọ akwụkwọ Royal nke General Practitioners anabatala ya. Ihe omumuihe a bara uru 7 CPD maka ulo akwukwo na ubochi 4 maka uzo ubochi. Ọ dị na UK na Republic of Ireland. Biko kọntaktị anyị ma ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmatakwu gbasara nzụlite dị n’ọdịnihu ma ọ bụ ịhazi ihe omume n’obodo gị. Anyị enyefela ọzụzụ a ihe karịrị oge 20.
Akwụsịla ịnyefe ụlọ ọrụ a oge oge ọrịa Covid na-efe.
Ịgbajiri ịntanetị na-apụta ngwa ngwa dị ka nsogbu ịkwa iko. Nke a kwekọrọ na iji smartphones mee ihe na mfe ịnweta vidio vidiyo na 10 gara aga. E nwere ọtụtụ nsogbu ahụike na nke ahụike. Dị ka ọmụmaatụ, mmụba na-arịwanye elu nke nrụrụ na erectile na ụmụ nwoke na-eto eto, ihe àmà zuru oke nke afọ ojuju mmekọahụ na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, na nchekasị nke ọha mmadụ na nhụjuanya anụ ahụ na-eto eto dị ka ihe metụtara ọdịdị omenala a.
Ndị ọkachamara ahụike kwesịrị ịmara ihe akaebe na-akwado ụdị ahụ riri ahụ. Enwere nhọrọ ịgwọ ọrịa dị irè ugbu a na ọgwụgwọ dị iche iche nke na-eme ka mgbake dị mma gụnyere ịkọwapụta mmekọrịta mmekọrịta dị mma.
Ihe omumu ihe omumu a ga - ewebata mmeghe nke neuroscience riri aru na ihe nlere intaneti na intaneti, dabere na nyocha ohuru. Ọ ga - elele ụdị dị iche iche nke ahụike anụ ahụ na ọnọdụ ahụike nke uche metụtara metụtara iji porn na-apụta na nyocha ahụ. Anyị ga-akwado mkparịta ụka na-atụgharị uche n'etiti ndị na-eme ihe gbasara omume kacha mma, ndozi enwere ike, yana nhọrọ mgbake.
Ihe omumu nke ubochi zuru oke banyere ihe omuma ndi mmadu na ndi nwoke na ndi nwoke
Anyị enweghị ụlọ ọrụ ọhaneze ụbọchị ọ bụla edobere n'ihi ọrịa Coronavirus, mana anyị na-emeghe echiche nke oge na ebe ị ga-achọ inwe otu.
09.00 - Okwu Mmalite nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị, Nnwale Ahụhụ Ukwu Ahụ, nkọwa nke Healthtù Ahụ Ike ofwa banyere ahụike mmekọahụ, ICD-11 na nsogbu ịkwa iko nke mmekọahụ, ụdị riri ahụ na ụdị ụbụrụ, ụkpụrụ nke omume onye ọrụ yana ịbawanye na ihe siri ike
10.30 - Agbaji
10.45 - Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ihe ọghọm - mmetụta uche na ahụike pụtara, gụnyere nsị nke mmekọahụ maka ndị na-eto eto, ndị nwoke na ndị nwanyị. Mkparịta ụka obere mkparịta ụka, na-ajụ ndị ahịa banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ha na-eji, mgbe ahụ mkparịta ụka niile. Ndị na-eto eto na-eji usoro, mmekorita nke mmekọahụ, mgbanwe nke omume mmekọahụ na ọha mmadụ, nsogbu ahụike ọgụgụ isi, mmekpa ahụ ụmụaka na-enwe mmekọahụ, omume mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ na ọrụ nke ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ime ihe ike n'ụlọ. Q & A nnọkọ.
13.00 - Nri ehihie
14.00 - Ihe eji ese ihe ndi ozo na ihe ndi di iche iche di iche iche, nyocha maka nsogbu ndi oru na inye ihe ndi ozo iji kwado nkwado. Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ dị ka nsogbu ndụ na LGBTQI + na obodo MSM, nkwarụ, chemsex, nhọrọ ọgwụgwọ, Nsogbu Ndị Na-akpali agụụ mmekọahụ Jiri Akara, obodo ndị na-agbake n'ịntanetị na ndị na-ede akwụkwọ mmekọrịta. Mkparịta ụka otu.
15.15 - Agbaji
15.30 - Iweghachite na mgbochi - Ego ole porn riri oke? Ọgwụgwọ na nhọrọ mmụta, ị addictionụ ọgwụ ọjọọ, iwepụ, 'okwu ire', uche, CBT na ọgwụgwọ ọgwụ. Anyị na-akwụsị iwulite nghọta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị na usoro ọgwụgwọ gị.
16.20 - Nyocha na mmechi.
Mary Sharpe bụ onye nchoputa na onye isi ọrụ nke ọrụ ebere Onyinye wardgwọ Ọrụ - Lovehụnanya, Mmekọahụ na Intanet. Ọ nọ na-egosi mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị nye ndị ọkachamara na ahụike, ikpe mpụ na agụmakwụkwọ na ụlọ akwụkwọ maka afọ 5 gara aga. Meri bụ onye otu Board nke Society maka Ọganihu Ahụ Ike Mmekọahụ na USA site na 2016 ruo 2019.
Mary dabere na Mahadum Cambridge ruo afọ iri. N'ebe ahụ, ọ mere nyocha maka mmemme NATO Science for Peace and Security. Ọ bụ onye nta akụkọ sayensị maka Cambridge-MIT Institute. Nke a bụ ọrụ ọ rụburu na European Commission na Brussels. Ọ kụzikwaara ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ ka ha na-akwadosi oke ike site n'ọmụmụ ihe gbasara ndụ na njikwa nrụgide. na 2020 Mary laghachitere Mahadum nke Cambridge dika onye nleta Ọmụma na Lucy Cavendish College. Meri mere iwu dịka onye ọka iwu na onye ọka iwu ruo ihe karịrị afọ 15. Ọ bipụtara n'ọtụtụ akụkụ nke ahụike, mmekọahụ na iwu wee kwuo okwu na nzukọ ụwa niile. Ọ na-enwe mmasị ihu na ihu na nkwurịta okwu. Ihe omuma nke zuru ezu banyere Meri di Ebe a.
Darryl Mead PhD bụ ọkachamara n'ịntanetị na onye nyocha na ụlọ ọrụ na-akpali agụụ mmekọahụ. N'ime ọrụ ya dị ka oche nke Regwọ Ọrụ hegwọ ahụ, ọ na-elekwasị anya na mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji na omume nke ndị na-eto eto na ndị okenye. Darryl na-emepe azịza ohuru ohuru banyere nsogbu ahụike metụtara nke nnabata nke ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-ele anya dị ka ihe omume nke ntụrụndụ buru ibu. Dịka onye isi ọrụ na National Library of Scotland, Darryl nyere aka ịtọlite ​​usoro UK ji eji ịntanetị. Onye nkụzi a zụrụ azụ, ọ na-arụ ọrụ ndị gara aga dị ka onye na-ekwurịta okwu sayensị na ọ bụ ọkachamara na-ahụ maka ozi (FCLIP).
Ajụjụ? Ajụjụ ndị ọzọ? Biko kpọtụrụ Ụgwọ Ụgwọ site na email: info@rewardfoundation.org ma ọ bụ mobile: 07506475204.